Inona ny Big Data? Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny angona lehibe? | Martech Zone
Ny fampanantenan'i lehibe dia ny fananan'ny orinasa faharanitan-tsaina bebe kokoa eo am-pelatanan'izy ireo handray fanapahan-kevitra sy faminaniana marina momba ny fomba fiasan'ny orinasany. Andao hizaha hevitra momba ny Big Data, inona izany, ary ny antony tokony hampiasantsika azy.
Big Data dia Tarika Lehibe
Tsy io no resahintsika eto, fa mety mihaino hira mahafinaritra ianao eo am-pamakiana momba ny Big Data. Tsy ampidiriko ny horonantsary mozika… tsy dia azo antoka ho an'ny asa izany. PS: Manontany tena aho raha nifidy ny anarana hisambotra ny onjan'ny lazan'ny besinimaro izy ireo.
Inona ny Big Data?
Ny angon-drakitra lehibe dia teny ampiasaina hanoritana ny fanangonana, ny fanodinana ary ny fisian'ny habetsaky ny angon-drakitra mivantana amin'ny fotoana tena izy. Ny telo an'ny V dia habe, haingam-pandeha ary isan-karazany miaraka amin'ny trosa Doug Laney). Ny orinasa dia manambatra ny varotra, ny varotra, ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa, ny angon-drakitra momba ny fifanakalozana, ny resaka ara-tsosialy ary koa ny angona ivelany toy ny vidin'ny stock, ny toetr'andro sy ny vaovao hahafantarana ireo modely misy ifandraisany amin'ny statistika izay manampy azy ireo handray fanapahan-kevitra marina.
Fa maninona no tsy mitovy ny data lehibe?
Tamin'ny andro taloha… fantatrao… taona vitsivitsy lasa izay, hampiasa rafitra hanangonana, hanova ary hampiditra ny angona (ETL) ho trano fitehirizana angon-drakitra lehibe izahay izay manana vahaolana momba ny asa aman-draharaha namboarina teo ambonin'izy ireo mba hanaovana tatitra. Indraindray, ny rafitra rehetra dia mamerina sy manambatra ireo angona ao anaty tahiry ahafahana manao tatitra ary afaka mahita ny zava-mitranga ny tsirairay.
Ny olana dia ny teknolojia angon-drakitra momba ny angon-drakitra tsotra izao no tsy mahazaka onjam-data marobe mitohy. Tsy tantiny ny habetsaky ny angona. Tsy afaka nanova ny angon-drakitra niditra tamin'ny fotoana tena izy. Ary ny fitaovana fanaovana tatitra dia tsy ampy izay tsy mahazaka na inona na inona afa-tsy ny fangatahana ifandraisany amin'ny any aoriana. Ny vahaolana Big Data dia manolotra fampiantranoana rahona, firafitry ny angon-drakitra voatahiry be sy nohavaozina, ny arisiva ary ny fahaizan'ny fitrandrahana mandeha ho azy, ary ny interface interface dia natao hanomezana famakafakana marina kokoa hahafahan'ny orinasa mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa.
Ny fanapahan-kevitry ny orinasa tsara kokoa dia midika fa ny orinasa dia afaka mampihena ny loza mety hitranga amin'ny fanapahan-keviny, ary mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa izay mampihena ny vidiny ary mampitombo ny fahombiazan'ny varotra sy ny varotra.
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny angon-drakitra lehibe?
Computer mandeha amin'ny risika sy ny fotoana mifandray amin'ny fampiasana angon-drakitra lehibe amin'ny orinasa.
Big Data dia ara-potoana - 60% isaky ny andro fiasana dia mandany fikasana hitady sy hitantana angona ireo mpiasa fahalalana.
Azo idirana ny angona lehibe - Ny antsasaky ny tompon'andraikitra ambony dia manao tatitra fa sarotra ny miditra amin'ny angon-drakitra.
Big Data dia Holistic - Ny fampahalalana dia itehirizana ao anaty silo ao anatin'ny fikambanana. Ny data momba ny marketing, ohatra, dia mety ho hita amin'ny tranonkala Analytics, finday Analytics, sosialy Analytics, CRM, fitaovana fitsapana A / B, rafitry ny varotra mailaka, ary maro hafa… samy mifantoka amin'ny silo-ny.
Big Data dia mendri-pitokisana - 29% amin'ireo orinasa no mandrefy ny sandam-bola amin'ny tsy fahampian'ny kalitaon'ny angona. Ny zavatra tsotsotra toa ny fanaraha-maso rafitra maro ho an'ny fanavaozana ny fampahalalan'ny mpanjifa dia afaka mamonjy dolara an-tapitrisany.
Big Data dia ilaina - 43% amin'ireo orinasa no tsy afa-po amin'ny fahafahan'ny fitaovany manivana ireo angona tsy ilaina. Zavatra tsotsotra toa ny fanivanana ny mpanjifa amin'ny tranonkalanao Analytics afaka manome fahitana iray taonina amin'ny ezaka ataonao.
Big Data dia azo antoka - Ny salanisan'ny fanitsakitsahana ny angon-drakitra dia mitentina $ 214 isaky ny mpanjifa. Ny fotodrafitrasa azo antoka aorinan'ny fampiantranoana angona lehibe sy ny mpiara-miombon'antoka teknolojia dia afaka mamonjy ny orinasa antonony 1.6% amin'ny vola miditra isan-taona.
Big Data dia manan-kery - 80% amin'ireo fikambanana no miady amin'ny kinova marobe amin'ny fahamarinana arakaraka ny loharanom-pahalalana. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana loharanom-baovao marobe, voarohirohy, orinasa maro kokoa no afaka mamokatra loharanom-pahalalana tena marina.
Big Data dia azo zahana - Ny angon-drakitra efa lany andro na ratsy dia miteraka 46% amin'ireo orinasa mandray fanapahan-kevitra ratsy mety handany vola an'arivony tapitrisa.
Trends Big Data sy Analytics 2017
2017 dia ho taona tsy manam-paharoa sy manaitaitra tokoa ho an'ny orinasa teknolojia amin'ny lafiny maro. Hiezaka ny mpandraharaha handanjalanja ny refy sy ny fifantohana amin'ny mpanjifa tsirairay nefa tsy handefitra amin'ny fahasarotan'ny asa. Ketan Pandit, Aureus Insights
Eto no ahitanao ny angona lehibe ampiasana:
94% n'ny matihanina amin'ny marketing no nilaza personalization ny mpanjifa niainany dia tena zava-dehibe
30 tapitrisa dolara amin'ny tahiry isan-taona amin'ny alàlan'ny fampiasana tombony ny angon-drakitra media sosialy amin'ny fitakiana sy hosoka Analytics
Amin'ny taona 2020, 66% amin'ny banky no hanana blockchain amin'ny famokarana ara-barotra sy amin'ny ambaratonga
Ireo fikambanana dia hiankina angon-drakitra mahira-tsaina bebe kokoa raha ampitahaina amin'ny angona lehibe.
Machine-to-Human (M2H) ny fifandraisan'ny orinasa dia ho lasa 85% hatramin'ny taona 2020
Manam-bola 300% bebe kokoa ireo orinasa Artificial Intelligence (AI) tamin'ny 2017 noho ny tamin'ny 2016
25% ny tahan'ny fitomboana amin'ny fisandratan'ny kabary ho loharanom-pahalalana mifandraika amin'ny data tsy voarindra
Zo ho adino (R2BF) dia hifantoka manerantany raha tsy jerena ny loharanom-pahalalana
Ireo ekipa serivisy ho an'ny mpanjifa 43% izay tsy manana analytics amin'ny fotoana tena izy hitohy hihena
Amin'ny 2020, ny Zava-misy marina (AR) ny tsena dia hahatratra $ 90 miliara raha ampitahaina amin'ny $ 30 lavitrisa Virtual Reality
Tags: angona azo arahanaaureus fahitanalehibeblockchainraharaham-barotra ny faharanitan-tsainafahefana datafahamendrehana dataData Securityetlnalainaangona holisticcomputingentanam2hangona mifandraikatahirin-kevitrahanovaangona azo antokaisan-karazanyhafainganam-pandehafahamarinan'ilayboky
Mpanjaka ny atiny… Nefa Iray ihany no mitondra satro-boninahitra
Sep 13, 2017 amin'ny 1: 34 AM